E-2 des Épervières - I-Chic tree house! - I-Airbnb
E-2 des Épervières - I-Chic tree house!
222 okushiwo abanye
Les Éboulements, Quebec, i-Canada
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Julie
Le ndawo yokuhlala ezimele, etholakala ngaphezu kwendawo yokuhlala yomnikazi, ibanzi, ikhanyayo futhi izungezwe uhlaza oluluhlaza! Ikhabethe langempela (i-chic futhi likhululekile) ezihlahleni! Njengebhonasi, i-spa ezokunikeza ukufinyelela esibhakabhakeni esinezinkanyezi ezinhle! Uzokwazi ukufinyelela, ukuhamba ngezinyawo imizuzu emibili, ukuya endaweni ye-ski enqamula izwe enemithambeka ecishe ibe ngu-25 km. Ngaphezu kwalokho, indawo yokuhlala itholakala imizuzu engama-20 ukusuka eziqiwini zikazwelonke, izikhungo ze-ski ekwehleni, i-Baie-St-Paul kanye ne-L'Isle-aux-Coudres.
Indawo yokuhlala ihlome ngokuphelele, ukuze ikunikeze indawo yokuhlala emnandi futhi ikuvumele ukupheka ngemva kokuvubukula imikhiqizo yethu yasendaweni emnandi! Kodwa kukhona nezindawo zokudlela eziseduze!
4.97 out of 5 stars from 222 reviews
4.97 · 222 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-222
Ngihlala emaphandleni, ngokuqondile phansi kwentaba endaweni yasehlathini. Kodwa-ke, ngiyimizuzu emi-5 ephezulu, ngemoto, ngisuka edolobhaneni. Idolobhana liphethe izindawo zokudlela ezimbalwa ezinhle, abakhiqizi bokudla, isitolo esincane segrosa esine-SAQ, ikhemisi namanye amabhizinisi amancane awusizo nathakazelisayo. Ngaphezu kwalokho, ngiyimizuzu engu-15 ukusuka e-Baie-Saint-Paul, idolobhana elidume kakhulu ngentshisekelo yalo yezivakashi!
Nakuba umnikazi eqinisekisa ubumfihlo obukhulu kakhulu kubahambi ngesikhathi sokuhlala kwabo, ukuba seduze kwendawo yakhe yokuhlala kumvumela ukuthi ahlangabezane nezidingo zabo ezithile.
Hlola ezinye izinketho ezise- Les Éboulements namaphethelo